समाज Archives - नेपाल आज
Posted on: April 25, 2017Posted by: netra
वैशाख १२ । धार्मिक, सांस्कृतिक र संस्कारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको जानकी नवमी र जानकी विवाहपञ्चमीका दिन राष्ट्रिय बिदाको माग गरिएको छ । जनकपुरधाममा मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले सो माग गर्दे जानकी नवमीलाई सरकारी र निजीस्तरबाट भव्य किसिमले मनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । भेलाले ‘राष्ट्रिय विभूति सीताको जन्म र विवाहका दिनमा सरकारीस्तरबाट हालसम्म कुनै कार्यक्रम र […]
Posted on: April 25, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
वैशाख १२ गते । घरकै छेउमा विद्यालय छ । तर, मोरङको बाहुनी–बनौलमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । गाउँको विद्यालयमा नाम लेखाएका पनि हजुरआमा हजुरबुबालाई काम सघाउनु पर्ने भएकाले विद्यालय जान पाउँदैनन् । मोरङको बाहुनी सोमबारेकी अन्जना ऋषिदेव १० वर्ष पुगिन् । तर उनले विद्यालय देखेकीे छैन । उनी भन्छिन्, “बुबा आमा पञ्जाब […]
जंगली च्याउ खाँदा छ जना सिकिस्त विरामी
वैशाख १२ । जङ्गली च्याउ खाँदा इलाम देउमाई–१० साङरुम्बाका एक वृद्धसहित एकै परिवारका ६ जना सिकिस्त विरामी भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका अनुसार च्याउ खाँदा देउमाई नगरपालिका–१० का ४६ वर्षीय देउमान लिम्बू, ५५ वर्षीय सुकपाल लिम्बू, २४ वर्षीय शेसे लिम्बू, २० वर्षका साङ्बो लिम्बू, १७ वर्षीया तेरुहाङ लिम्बू र ७५ वर्षीया दलहाङमा लिम्बू […]
नेपालमा पसिना बगाइरहेका अष्ट्रेलियन युवाको सपना, नेपालीहरु आँसुको भरमा बाँच्नु नपरोस्
वैशाख १२ । वैशाख १२ को विपत्तिपछि पनि लाखौं नेपाली युवा बिदेसिए। विभिन्न कारणले आफ्नो देशको पुनर्निर्माणमा जुट्न सकेनन् । परिवारको आर्थिक सुधार र समृद्धिका निम्ति गाउँगाउँका नेपाली युवा मजदुरी गर्न समुद्रपारि पसिना बगाउन बाध्य छन् । तर, २२ वर्षीय अस्ट्रेलियन नागरिक निक अब्राहिमु भने नेपालमा पसिना बगाउँदै वैशाख १२ को भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको […]
धनकुटामा बस दुर्घटना २७ घाइते, १० को अवस्था गम्भिर
वैशाख १२ । मूलघाट सडकखन्डमा सोमबार बस दुर्घटना हुँदा २७ यात्री घाइते भएका छन् । संखुवासभाको खाँदबारीबाट धरान जाँदै गरेको को१ख ४०७२ नम्बरको पशुपति यातायात मूलघाट–च्याङ्च्याङ्बारीमा पर्ने जंगलभित्रको पाँच गोलाइमा दुर्घटना भएको जनाइएको छ । ब्रेकफेल भइ अनियन्त्रित बस भित्तामा ठोक्किएर सडकमा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते सबैलाई उपचारका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य […]
बन्धक बनाएर जग्गा हडप्न खोज्ने चार पक्राउ
वैशाख – ११ । अपहरण एवम् बन्धक बनाएर किर्ते प्रक्रियाबाट जग्गा हडप्न खोज्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी साेमबार सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले साेमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मेचीनगर नगरपालिका–४ का तेजेन्द्र न्यौपाने, वडा नंं ६ का भरत सुब्वा र प्रेम न्यौपाने तथा वडा नंं ७ का राजु कुँवरलाई सार्वजनिक गरेको हो । […]
आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै नवराज सिलवालद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट
वैशाख ११ । नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका छन् । आज दिउँसो सिलवालका तर्फबाट अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनको रिटमा सिलवाललाई पक्राउ नगर्न आदेश माग गर्दै रिटको पेशी आजै तोक्न अनुरोध गरिएको छ । यसअघि छानबिनका लागि भन्दै प्रहरीले […]
बाजुरामा जीप दुर्घटना चारको निधन ९ घाइते
वैशाख ११ । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका –२ मा जीप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । बाजुराको मार्तडीबाट घटमुना जाँदै गरेको से १ ज ६३९ नम्बरको जीप आइतबार साँझ दुर्घटना हुँदा ४ जनाको निधन भएको हो भने ९ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा गौमुला ६ सटेला बस्ने लाली रोकाया, शेर बहादुर रोकायाको घटनास्थलमै […]
मोटरसाइकलको ठक्करबाट पूर्व गृहसचिवको निधन
वैशाख ११ । मोटरसाइकलको ठक्करबाट पूर्व गृहसचिव पदमराज सुवेदीको निधन भएको छ । पैदल हिडिरहेका सुवेदीलाई बाटो काट्ने क्रममा आइतबार अनामनगरमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो । अनामनगरबाट हनुमानस्थानतर्फ जाँदै गरेको बा ७९ प ४३९२ नम्बरको मोटरसाइकलले सुवेदीलाई ठक्कर दिएको थियो । घाइते सुवेदीको उपचारका क्रममा आइतबार दिउँसो नर्भिक अस्पतालमा मृत्यु भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले […]
पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखामा शान्ताराम विडारी
बैशाख ११ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ शाखामा प्रेस चौतारीका तर्फबाट उमेदवार बनेका शान्ताराम विडारी विजयी बनेका छन् । आज सम्पन्न मतगणना अनुसार प्रेस सेन्टरका तर्फबाट उमेदवार बनेका रामकृष्ण अधिकारीलाई पराजित गर्दै विडारी विजयी बनेका हुन् । त्यस्तै उपाध्यक्षमा सुर्य सुवेदी विजयी बनेका छन् । मत परिणाम केहीबेरमा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
सरकारी जागिर छाडेर गाइपालनमा
वैशाख ११ । सरकारी नोकरी कसलाई खान मन हुँदैन र ? तर त्यो जवाफ मोरङको मधुमल्ला गाविसका एक शिक्षक कृष्ण आचार्यको सवालमा गलत हुनसक्छ । माध्यमिक तहमा १२ वर्षसम्म नेपाली विषय अध्यापन गराएका मधुमल्ला–९ का कृष्ण आचार्य सरकारी जागिर छोडेर गाईपालन गरिरहेका छन् । सरकारले पशुपालन गर्ने किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि आचार्यलाई पशुपालन गरिरहँदा थप […]
वैशाख ११ । नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बालुवाटारस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको घरमा कानुनी परामर्श लिइरहेका बेला सिलवाललाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको हो । सिलवालसँगै थापालाई पनि प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने छानविन समितिले सिलवाललाई बयानका लागि ल्याएको बताएको छ ।
विराटनगरमा पूजाको प्रसाद खाँदा एक सयभन्दा बढी बिरामी
बैशाख ११ । विराटनगर उपमहानगरपालिका–१९ घिनाघाटस्थित पञ्चकन्या टोलको एक घरमा लगाइएको पूजाको प्रसाद खाँदा एक सयभन्दा बढी बिरामी परेका छन् । ईश्वरी पौडेलको घरमा लगाइएको पूजाको प्रसाद खाएकाहरुमा झाडापखाला लाग्ने, बान्ता आउने, टाउको दुख्नेलगायतका समस्या देखिएको हो । पौडेलको घरमा चार दिन अघि लगाइएको घरपैंचो पूजामा रोटी, तरकारी र अचार खाएपछि बिरामी परेको स्थानीय नवराज […]
मकवानपुरमा यात्रु बस र ट्रक ठोक्किदा ९ घाइते, एकको अवस्था गम्भिर
वैशाख ११ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–९ रजैयामा गएराती यात्रु बस ट्रकमा ठोक्किँदा बसमा सवार ९ जना यात्रु घाइते भएका छन् । गएराती साँढे १२ बजे हेटौडाबाट चितवनतर्फ आउँदै गरेको ना ६ ख १२४९ नम्बरको ट्रकमा ना ५ ख २०२० नम्बरको बस पछाडिबाट ठोकिएको थियो । घाइते ९ जनाकै चुरेहिल अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । घाइते […]
बाँकेमा भिषण आगलागी तीन बालबालिकाको निधन
वैशाख ११ । बाँकेको होलियामा गएराति भएको आगलागीमा तीन जनाको बालबालिकाको जलेर मृत्यु भएको छ । बाँके जिल्लाको होलिया गाउंमा मध्यरातमा हावाहुरीका कारण सल्किएको आगोका कारण एकै परिवारका २ बालक र एक बालिका सहित ३ जनाको निधन भएको बांके प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै आगलागीबाँट ९ घर जलेर नष्ट भएको छ । शसस्त्र प्रहरी, नेपाल […]
पराजुलीको एसएलसी प्रमाणपत्रै गायब !
वैशाख ११ । २०३१ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा प्रमाणपत्र तह आईएलमा भर्ना भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कक्षा रोल नम्बर ११८ हो । विद्यार्थीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति र पिताको नामलगायत व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख हुने रजिस्ट्ररमा उनीसहित अन्य चार जना विद्यार्थीको विवरण छोपिएको छ। नेपाल ल क्याम्पसमा उनका अन्य कागजात रहे पनि एसएलसी प्रमाणपत्रको […]
सेना खटाउने प्रस्ताव शीतल निवासमा
वैशाख ११ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला नेपाली सेना खटाउने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । राष्ट्रपतिको स्वीकृतिपछि मात्र सेना परिचालन गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आउन तीन साता बाँकी छँदा पनि सेना परिचालनको स्वीकृति प्राप्त नहुँदा तयारीमा समस्या भएको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल […]
भेटी र चन्दाबाट नै ८ करोडको पूर्वाधार निर्माण
वैशाख – १०। धार्मिकस्थलमा चढाइएको भेटीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न र पारदर्शिता अपनाउन सकियो भने त्यसबाट करोडौँ रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण म्याग्दीको गलेश्वरमा देखिएको छ । मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रुपमा परिचित म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वरधाममा २०६७ सालयताका छ वर्षमा भक्तजनले चढाएको भेटी, महायज्ञबाट सङ्कलन भएको दान र तीर्थयात्रीले दिएको दानबाट आठ करोडको […]
करेण्ट लागेर वालिकाको निधन
वैशाख १० । सप्तरीमा आईतवार विहानै करेण्ट लागेर एक वालिकाको मृत्यु भएको छ । शम्भुनाथ नगरपलिका–८ निवासी सुनिलकुमार दासकी नौ वर्षीया छोरी विभाहकुमारी दासको मृत्यु भएको हो । पानी तान्ने मोटरमा जडान गरिएको नाङ्गो तारवाट करेण्ट लागेर वालिकाको मृत्यु भएको रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले जनाएको छ । नुहाउने क्रममा रहेकी उनलाई नाङ्गो तारवा करेण्ट […]
डोटीमा दुर्घटना १९ घाइते एकको अवस्था गम्भिर
वैशाख १० । डोटी जिल्लाको पुर्वी चौकि गाँउपालिका वडा नं. ५ मा पर्ने सानागाँउको साजघाट बजार नजिक बस दुर्घटना भएको छ । शनिबार साँझ ८ बजे बाजुराबाट नेपालगञ्ज गइरहेको ३१ यात्रु सावार ना ४ ख ६२९१ नम्वरको बस अर्को बसलाई साइड दिन खोज्दा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायव उपरिक्षक डिल्लीराज विष्टले नेपाल […]
कक्षा १२ को परिक्षा सुरु, ३ लाख ५३ हजार १२ परीक्षार्थी सहभागी
वैशाख १० । कक्षा १२ को माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण परीक्षा एसएलसीई आजबाट शुरु भएको छ । पहिलो दिन आज विहान ७ बजे देखि अंग्रेजी विषयको परीक्षा भइरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मुलुकभरका ९ सय ९१ केन्द्रमा आज परीक्षा शुरु गरेको हो । परीक्षामा मुलुकभरका ३ लाख ५३ हजार १२ परीक्षार्थी सहभागी छन् । सरकारले […]
माछा मार्न जाँदा २ जनाकाे मृत्यु
Posted on: April 23, 2017April 23, 2017Posted by: Tirtha Khanal
वैशाख १० । मकवानपुरको मनहरी गाँउपालिका–८ स्थित राप्ती खोलामा माछा मार्न गएका दुई युवाको डुबेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मनहरी–७, रमनटारका सीताराम विक र तुलाबहादुर पाख्रिन रहेको प्रहरीले बताएको छ । माछा मार्ने क्रममा शनिबार उनीहरुको डुबेर मृत्यु भएको थियो । शव निकाल्न साढे तीन घन्टा लागेको प्रहरीले जनाएको छ । इलाका प्रहरी […]
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयारः यस्तो हुँदैछ प्रहरी संरचना
वैशाख १० । प्रहरीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा संघीय प्रहरी केन्द्रीय प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी र प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको एक समितिले शुक्रबार मस्यौदा टुंगो लगाएको हो । आइतबार गृहसचिवलाई ऐनको मस्यौदा बुझाउने […]
वैशाख १० । स्थानीय चुनाव लड्नका लागि बैतडीका पाँच शिक्षकले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने शिक्षकले टिकट पक्का भएपछि राजीनामा दिएको बताएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीका नायब सुब्बा वसन्तबहादुर सिंहका अनुसार राजीनामा दिने शिक्षकहरुमा सीताराम प्रावि खेती थलाकाडामा कार्यरत शेरबहादुर चन्द, कैलपाल मावि ढाडवमा कार्यरत रामबहादुर कुँवर, ज्ञानेश्वर मावि सिद्घेश्वरमा कार्यरत पृथ्वीराज […]
निर्वाचनमा भारतद्वारा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
वैशाख – ९ । बाँके जिल्लाको राप्तीपारि बघौडा क्षेत्रअन्तर्गत नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रका भारतीय सुरक्षा अधिकारीसँग स्थानीय निकाय निर्वाचनका सन्दर्भमा सुरक्षा अधिकारीहरुले छलफल गरेका छन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थको नेतृत्वमा सो क्षेत्रको सुरक्षाको अवस्था र निर्वाचन तयारी व्यवस्थापन अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेको टोलीले निर्वाचनमा दुई पक्षबीच आपसी सुरक्षा समन्वय र सहयोगका विषयमा […]
Posted on: April 21, 2017Posted by: Bishow Rimal
वैशाख–८ । सडक खन्ने क्रममा लडेर आएको ढुङ्गाले किचेर डोटीको शिखर नगरपालिकामा आज बिहान एकजनाको मृत्यु भएको छ । निर्माणाधिन भागेश्वर–मुडेगाउँ–जल्पु सडक खण्डको मुडेगाउँमा सो घटना भएको हो । घटनामा परी शिखर नगरपालिका –२ मुडेगाउँका ७३ वर्षीय बागे दमाइँको मृत्यु भएको हो । माथि डोजरले बाटो काटिरहेको अवस्थामा मृतक वृद्ध करिब सय मिटर तल जन्ती […]
वैशाख–८ । महोत्तरीको मटिहानीमा बिहीबार साँझ भारतीय गाडीले ठक्कर दिँदा दुई महिलासहित तीनजना गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा मटिहानी–४ का ३२ वर्षीया हसिना खातुन, धीरापुर–६ बस्ने २० वर्षीय बबलु साह र धनुषा जिल्लाको तुल्सियाही जब्दीकी ४० वर्षीया खैरुना खातुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीले जनाएको छ । मटिहानीबाट जलेश्वर आउँदै गरेको बिएसआर १ […]
बेमौसमी वर्षाले भोजपुरका ग्रामीण सडक प्रभावित
वैशाख–८ । बेमौसमी वर्षात्ले भोजपुरको मध्यपहाडी राजमार्ग लगायत ग्रामीण सडकहरू प्रभावित भएका छन् । हालको बेमौसमी ठूलो वर्षात्का कारण जिल्लासँग तराई र गाउँसम्म जोडिएका सडक प्रभावित भएका हुन् । गएरातिको वर्षात्का कारण भोजपुर–चखेवा हुँदै खोटाङ जाने यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् भने भोजपुर–लेगुवा सडकखण्डमा समेत यातायात सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको संयुक्त बस व्यवसायी सङ्घ, भोजपुरले […]
पत्रकार महासङ्घ मुस्ताङमा थकाली सर्वसम्मत अध्यक्षमा चुनिए
वैशाख–८ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा मुस्ताङको अध्यक्षमा सुन्दरकुमार थकाली सर्वसम्मत अध्यक्षमा चुनिएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न प्रथम अधिवेशनले थकालीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्म्तले चयन गरेको हो । कार्यसमितिको महिला उपाध्यक्षमा सम्झना थकाली, उपाध्यक्षमा तृष्णा गौचन, सचिवमा दुर्गादेवी रसाइली, कोषाध्यक्षमा निरज थकाली, सहसचिवमा विकास विक र समावेशी सहसचिवमा फुलकुमारी नेपाली रहेका छन् […]
अन्तरजातिय विवाह गरेकाे भन्दै निर्वस्त्र बनाएर गाउँ घुमाएपछि
बैशाख ८ । भारतस्थित राजस्थानको आदिवासी बस्ने जिल्ला बाँसवाडाको कालिन्जर थाना क्षेत्रमा एक प्रेमीले अन्तरजातिय विवाह गरेको भन्दै गाउँलेहरुले उक्त प्रेमीलाई नांगै बनाएर गाउँ घुमाएका छन् । अलग अगल जातका कचरु र मोनका नाम गरेका युवक र युवती करिब दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहँदै आएका थिए । उक्त युवकले डरले आमा बाबुलाई सम्बन्धको बारेमा बताउन […]
पहिराेले पुरिएर तीनको मृत्यु
वैशाख–७ । कालीकोट जिल्लाकाे स्थानीय लालीघाट बजारमा आज साँझ आएको पहिराेले तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पहिराेले चियापसलमा चिया खान बसेका दुई र पसल सञ्चालकको मृत्यु भएको अस्थायी प्रहरी चौकी हुल्मका प्रहरी हवल्दार सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । अहिले पनि पानी परिरहेको र पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएकाले उद्धारमा कठिनाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ । […]
वैशाख–७ । हिमालयन ट्रष्टले दुई वर्षअघिको भूकम्पबाट क्षति भएका सोलुखुम्बुका विभिन्न सातवटा विद्यालयमा भूकम्प प्रतिरोधी ३७ वटा नयाँ कक्षाकोठा निर्माण गर्नुका साथै छवटा कक्षा कोठा मर्मत गरेर सम्बन्धित विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । भूकम्पलगत्तै कक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विद्यालयमा पाल उपलब्ध गराउनुका साथै सिकाइ केन्द्रसमेत निर्माण गरिदिएको ट्रष्टले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर चार करोड […]
अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै डिआईजी शिलवालसँग स्पष्टीकरण
वैशाख ७ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै डीआइजी नवराज सिलवालसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको निर्देशनमा सिलवालसँग स्पष्टीकरण मागिएको जानकारी प्रहरीको उच्च अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार महानिरीक्षक अर्यालले पद सम्हालेको भोलिपल्ट चैत २९ मा बोलाएको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी)को बैठकमा सहभागी नभएर सिलवालले प्रहरीको नियम […]
१६ वटा मन्त्रालयमात्र राख्ने गरी कार्यदलले बुझायो सिफारिससहितको प्रतिवेदन
वैशाख ७ । संघीय संरचनामा हाल कायम मन्त्रालय संख्या आधा घटाई १६ मात्रै बनाउन सिफारिस गरिएको छ । संघीय संरचनाका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको यकिनका लागि डेढ महिनाअघि गठित कार्यदलले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई बुझाएको हो । आर्थिक जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन भन्दै कार्यदलले अनावश्यक […]
वैशाख–६ । मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–४ हाँडीखोलमामा आज अपराह्न चट्याङ लागेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नौ वर्षीय बालक अशोक प्रजा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । घरमै बसिररहेको अवस्थामा उनलाई चट्याङ लागेको थियो । चट्याङ लागेर उनका बाबु रामकुमार प्रजा सामान्य घाइते भएकाले उनको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले […]
पत्रकार महासंघ जाजरकोटकाे अध्यक्षमा सिंह निर्विरोध
बैशाख ६ । नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाको अध्यक्षमा पत्रकार भीमबहादुर सिंह निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पाँचौ जिल्ला जिल्ला अधिवेशनबाट निर्विरोध रुपमा सिंह अध्यक्षमा चयन भएका हुन । उनी प्रेस युनियनसम्बद्ध पत्रकार हुन् । सिंहको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएका छ । यसैगरी समितिको उपाध्यक्षमा दिनेश कुमार श्रेष्ठ, महिला उपाध्यक्षमा लिला पौडेल, […]
मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्व कम गर्नुपर्नेमा जोड
वैशाख–६ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा हुने मानवीय द्वन्द्व कम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । ‘युवा अग्रसरताः संरक्षण र समृद्धिको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नाराका साथ वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको २२ औँ वन्यजन्तु सप्ताहका क्रममा आज यहाँ आयोजित ‘वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले […]
खानेपानी सुविधाबाट नगरपालिकाकै दलित समुदाय वञ्चित
वैशाख–६ । पर्वतका दलित समुदाय राज्यकै खानेपानी आयोजनाको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । पर्वतको फलेवास नगरपालिका– ५ खानीगाउँका दलित समुदायलले नियमित खानेपानी महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित गराइएको स्थानीयवासी यामबहादुर परियारले जानकारी दिए । सरकारको झन्डै सात करोडको लागतमा निर्माण गरिएको फलेवास वृहद खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीर्घनारायण कुँवरसहितको कार्यसमितिले साविकको खानीगाउँ– ७ […]
बर्दियामा बाघको आकर्षण
वैशाख–६ । छोटो बसाइँका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आएका बेलायतका मार्टिन बाराले पहिलो दिनमै बाघ देखे । नजिकबाट बाघ देख्न पाउँदा उहाँ निकै खुसी भए । जीवनमा पहिलोपटक प्रत्यक्ष रूपमा बाघ देख्ने अवसर पाएका मार्टिन अर्कोपटक फेरि बाघ हेर्न नेपाल आउने निधो गरेर फर्किए । बर्दिया निकुञ्जमा हिजोआज दिनैपिच्छे बाघ देख्न पाइन्छ । बाघका कारण […]
यसरी बाँचे गोहीको मुखबाट अर्जुन
वैशाख ६ । ठूल्ठूला जेब्रा, अर्नालगायत वन्यजन्तु गोहीले सजिलै मारेका घटना हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट देख्छौँ । गोहीले समाइसकेपछि फुत्किने मौका कमै हुन्छ । तर चितवनमा गोहीको मुखमा पुगेका मामुली बालक फुत्किए् भन्दा तपार्इंलाई आश्चर्य लाग्ला । यो यथार्थ हो । गोहीले समाएका बालक सकुशल फिर्ता भए । अहिले उनी उपचाररत छन् । गत चैत २५ […]